pCloud မှာ Download ခလုတ်နဲ့ Save ခလုတ်ပျောက်နေရင် | Online Service Center Myanmar -->
pCloud မှာ Download ခလုတ်နဲ့ Save ခလုတ်ပျောက်နေရင်
"pCloud မှာ Download ခလုတ်နဲ့Save ခလုတ်ပျောက်နေရင်"
pCloud နဲ ့တင်ပေးထားတဲ့ File တွေကို Download ပြုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ တစ်ခါတရံမှာ သူတို ့ပေးထားတဲ့ Download Link သူတို့ပိုက်ဆံရှာထားတဲ့ Adf Link ကိုဝင်ပြီး
SKIP AD ကို နှိပ်လိုက်ပေမယ့် Download နဲ ့Save to pCloud ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးတွေ ပျောက်နေလို့စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ပြန်လှည့်လာရတာ ကြုံဖူးကြမှာပေါ့။ အခု အဲ့ဒီ လိုမဖြစ်ရအောင်လို့အဲ့ဒါလေးကို ဖြေရှင်းနည်းလေး ရေးပေးထားပါတယ် အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြပါဦး ကြိုက်တယ်ဆို ပြန်လည်ပြီးတော့ Share ပေးသွားပေါ့။ :D
1. ပထမဆုံးအနေနဲ့ အဲ့ဒီ Web Page မှာ Right Click ခေါက်လိုက်ပြီး
ပေါ်လာတဲ့အထဲက Inspect Element(Q) ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
2. အောက်ပါ စာကြောင်း
<div class="button-area" style="display: none;"><div class="button greenbut linebut modernbut greendisabled">Download</div><div class="button linebut modernbut">Save to pCloud</div>
လေးကို ရှာဖွေလိုက်ပါ အလွယ်တကူရှာလို့မတွေ့လျှင်
> မျှားလေးတွေ > အဲ့လို ဖြစ်နေရင် အောက်ကို စိုက်သွားအောင် လိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
<div class="button-area" style="display: none;"> မွာပါတဲ့ none ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ Double Click ခေါက်ပြီး yes လို့ဖြစ်စေ show လို့ဖြစ်စေ ပြောင်းပေးလိုက်ပါ။
( နမူနာ )
<div class="button-area" style="display: yes;">
<div class="button-area" style="display: show;">
4. အထက်ပါအတိုင်း ပြောင်းပြီးလျှင် အပေါ်က လွတ်တဲ့ တစ်နေရာမှာ Click ချ ( Click နှိပ် ) လိုက်ပါ အောက်ပါအတိုင်း Download နဲ့ Save to Pcloud ဆိုတာလေးပြန်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်(အောက်မှာကြည့်ပါ)။
5. အထက်ပါအတိုင်း Download နဲ့ Save to Pcloud ဆိုပြီး ပေါ်လာပြီမို့လို့ Save to Pcloud ကို နှိပ်ပြီး File ကို Save လုပ်လို့ရပါပြီ Pcloud Account မရှိသေးဘူးဆို ဒီနေရာ လေးမှာ သွားဖွင့်လိုက်ပါ 500 GB ကုိ Free 1 လ အသုံးပြုခွင့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်( Pcloud Account ရှိတယ် သို့မဟုတ် အသစ်ဖွင့်လို့ရသွားပြီဆိုလျှင် အောက်ပါအတိုင်း မိမိရဲ့pCloud Account မှာ ဖိုင်ကို Save လုပ်လို့ရပါပြီ)။
6. ကဲ... အထက်ပါအတိုင်း ဖိုင်ကို Save ပြီးပြီဆိုရင် တစ်ခု ထပ်လုပ်ကြည့်ရအောင် အဲ့ဒါက ဘာလေးလည်းဆိုတော့ Download ဆိုတာလေးက မှိန်နေတာကို သတိထားမိတယ်မလား...?
အဲ့ဒါလေးကိုပြင်ဖို့ ခုနက Code တွေ....
<div class="button greenbut linebut modernbut greendisabled">
ဆိုတဲ့ နေရာလေးမှာပြင်ရမှာပါ ပြင်ရမယ့် နေရာကတော့ greendisabled ဆိုတာလေးမှာ
greenenabled လို့ပြောင်းပေးလိုက်တာပါ Disabled ဆိုတာလေးကို Enabled လို့ပြောင်းပြီးတော့
ရေးလိုက်တာပါပဲ ပြင်ရေးပြီးရင် ဒီလို ဖြစ်သွားပါမယ်။
<div class="button greenbut linebut modernbut greenenabled">
အဲ့လိုလေး ဖြစ်သွားပါမယ်(အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ Download ဆိုတာလေး အထင်းသားပေါ်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်) ။
တကယ်တော့ ပထမဆုံး စပြင်ကတည်းက ဒါလေး တစ်ခါထဲ ပြင်လို့ရတာပါ အများကြီးလိုက်ပြင်နေရတာပါလားဆိုပြီး ထင်နေတဲ့အတွက် အဓိက Save to pCloud ဆိုတာလေးကို အဓိကထားပြီး ပြင်ဖို့အတွက်ပဲ ပြောပြလိုက်တာပါ။
<div class="button-area" style="display: yes;"><div class="button greenbut linebut modernbut greenenabled">Download</div><div class="button linebut modernbut">Save to pCloud</div>
ဆိုပြီး ပြင်လိုက်ရင် Download ဆိုတာရော Save to pCloud ဆိုတာရော ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဖိုင်ပေါ်မူတည်ပြီး Download ပြုလုပ်လို့မရတာတွေရှိပါလိမ့်တယ် ဒီနေရာမှာ မေးလာနိုင်တာတစ်ခုကတော့ Save to pCloud တော့ လုပ်လို့ရပြီး Download တော့ လုပ်လို့မရဘူးလားဆိုရင်တော့ Download လုပ်လို့ရရင်လုပ်လိုက်ပါ မရရင်တော့ Save to pCloud ပဲ လုပ်လိုက်ပါလို့ပဲပြောပါရစေ တစ်ချို့Permission မရတော့တဲ့ File တွေကတော့ Download ပြုလုပ်လို့မရနိုင်တော့ပါဘူး ရချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Script ထဲမှာ အဲ့ဒီ File ID ရယ် အဲ့ဒီ ဖိုင်ကို Download Permission ပေးထားတဲ့ Access Token Key ရယ်ကိုရပါမှ(သိမှ) သွားပြင်ထည့်ပေးလိုက်မှပဲ Download ပြုလုပ်လို့ရနိုင်မှာမို့ပါ( ပြင်ချင်ရင် အောက်က ပုံထဲကနေရာမှာ ဝင်ပြင်ကြည့် ရမယ်တော့မထင် :P )။
အထက်ကနေရာမှာ ဝင်ပြင်ကြည့်ပေါ့ File ID ကတော့ ရနိုင်ပြီး Download Permission ရတဲ့ Access Token Key မရတာနဲ့ဘာမှလုပ်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူး။ :D
Mobile သမား များအတွက် Bro Min Thu Aung ရဲ့ ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ အပေါ်ကနည်းလောက်တောင် မရှုပ်ပဲ အလွယ် လုပ်နည်းလေးပါ ဖုန်းနဲ့သုံးတဲ့သူတွေအတွက်နော် :D
Traffic ပိတ်နေပြီး Save to Pcloud ဘောက်မပေါ်ဘဲ
premium acc ဝယ်ခိုင်းနေခြင်းအား အလွယ်တကူ
Save နည်း (#ဖုန်းဖြင့်_သုံးနည်း PC မလို)
အရင်ဆုံး Chrome Browser ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ pcloud
free acc နဲ့ login ဝင်ထားလိုက်ပါ။ Traffic ပိတ်နေတဲ့
လင့်ကို ကော်ပီကူးထားပါ။ ပြီးရင် Chrome ကိုဖွင့်ပြီး
link ကို paste လိုက်ပါ။ url box ထဲမှာ လင့်ကို paste
ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း Go နဲ့ မဖွင့်ပါနဲ့။ လင့်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ
&copynow=1 ကို ရိုက်ထည့်ပြီးမှ Go ကို နှိပ်ပြီး သွားလိုက်ပါ။
ကိုယ့်အကောင့်ထဲကို auto save သွားပါလိမ့်မယ်။
ဥပမာ မူရင်းလင့်က အခုလိုပါ။
ကျနော်တို့ ပြင်လိုက်တဲ့လင့်က အခုလိုပါ။
ဖုန်းနဲ့ အဆင်ပြေတဲ့နည်းပါ -_- အားလုံး ဝုန်းနိုင်ကြပါစေ ငိငိ
ကဲ..... pCloud Account မရှိသေးသူများအတွက် 500 GB ကုိ 1 Month Free အသုံးပြုခွင့်ရစေဖို့အတွက် အောက်ပါ အတိုင်း pCloud Account Register ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Get to Free Sign Up today's.. ..
500 GB ကုိ တစ္​လစာ Free သုံးခြင္​့ရမည္​့အခြင္​့အ​ေရး..... 😉 😉 😉
​1. ​ေအာက္​ပါ Link မွ ၀င္​​ေရာက္​ၿပီး Sign Up ပြုလုပ်​ပါ။
2. Sign Up ပြုလုပ်​စဉ်​ ထည်​့ခဲ့သည်​့ Email ထဲကိုဝင်​​ရောက်​ပြီး Confirm ပြုလုပ်​​ပေးရမည်​့ Confirmation Link ကို နှိပ်​​ပေးပါ။
အထက်​ပါ2ချက်​ကို ပြုလုပ်​ပြီးလျှင်​ 500 GB ကို 1 လ တိတိ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင်​့ရမှာပဲ ဖြစ်​ပါတယ်​။
#Pcloud #pcloud500GBfree #free500GB
ကဲ... ဖတ်ပြီးလို့ ဗဟုသုတရတယ် အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် Share ပြုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ^_^
Knowledge Sharing Technology Tutorial
Unknown August 4, 2018 at 10:26 PM
Unknown November 21, 2018 at 2:59 PM